Nzira yekuziva kana Mwari akandiregerera ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kuziva sei kana Mwari vandiregerera. Kana iwe uchida kuziva zvechokwadi kana Mwari akakuregerera uye achida kuti iwe uve mwanakomana wake, usatarise kumberi, nekuti mhinduro yakanyorwa mukati mako. Mwari anoregerera vese vanovimba naye. Aya ndiwo maratidziro anoitwa Magwaro apo mupostori Pauro paakanyora "Mwari ndiponesei kubva pakuzvikudza, kunze kwemuchinjikwa waIshe wedu Jesu Kristu."
Naizvozvo hapana ikozvino kupiwa mhosva kune avo vari muna Kristu Jesu, vasingafambi maererano nenyama, asi noMweya.
Nekuti mutemo weMweya wehupenyu muna Kristu Jesu wakandisunungura kubva pamutemo wechivi uye rufu.
VaRoma 8: 1-2
Kune avo vese vanonetseka kuti vazive sei kana Mwari vandiregerera, tiri kuzoratidza nzira ina dzekuziva.
1 Ungaziva sei kana Mwari akandikanganwira: nzira ina
1.1 1. Bvuma zvivi zvako
1.2 Kumbira ruregerero
1.3 3. Inzwai Mweya Mutsvene
1.4 4. Inzwa kuvimbiswa kuti Jesu anewe
1.5 5. Inzwa rudo uye mufaro uyo Mwari aanawo kwauri
1.6 6. Inzwa rugare rwuri mumoyo mako
Ungaziva sei kana Mwari akandikanganwira: nzira ina
Nzira ina dzekuziva kana Mwari vandiregerera
1. Bvuma zvivi zvako
Zvivi ndizvo chero chinhu chisina kunaka chisingafambire mberi muhukama naMwari, nzanga uye isu pachedu. Zvitadzo zvinopa kukuvadza kwakanyanya kwazvo pakuve kwedu nekuda kwemhedzisiro yavanounza nazvo. Iyi mhedzisiro inogona kuve yetsika hunhu, inokanganisa hutano hwedu kana avo vepedyo nesu. Kuziva zvivi zvedu kunobatsira zvikuru, sezvo kuchitibatsira inotibvumidza isu kuti tione izvo zvinoda kugadziriswa uye kupi kwekuita dzimwe shanduko.
Pita ndine urombo Sara mushe Kugona kusununguka Unofanira kuzvitora zvakanyanya. Iwe unofanirwa kuda kuzviita zvichibva pamoyo, kwete nekuda kwekuti mumwe munhu anokutarisa kana kukuudza kuti iwe unofanirwa kuzvikumbira. Izvi hazvireve kuti iwe uri munhu anotyisa, zvinongoreva kuti iwe waita zvimwe zvisirizvo uye unoda rubatsiro rwaMwari kuti unzwe zvirinani uye ugone kurarama hupenyu hwako zvizere. Mwari wangode kuti iwe ufare.
3. Inzwai Mweya Mutsvene
Kunyangwe tisingakwanise kuona Mweya Mutsvene, tinonzwa simba ravoku. Kana isu tasarudza kuteerera kurudziro dzake uye nekuteerera kurudziro dzeMweya, tinokudziridza kunzwa kwemweya uye tinoswedera padyo naMwari. Mwari chete paanotiregerera ndipo patinogona kuzvinzwa.
4. Inzwa kuvimbiswa kuti Jesu anewe
Bindu reGetsemane ndiyo nzvimbo iyo Jesu Kristu, Mwanakomana waMwari, akatakura zvivi zvedu zvese kuti tigone kutendeuka uye kugamuchirwa muHumambo hwaMwari. Saka unonzwa kunge waregererwa riini une rugare rwepfungwa kuti Kristu anemi uye izvozvo zvinokufambisa pamweya.
5. Inzwa rudo uye mufaro uyo Mwari aanawo kwauri
Takakomborerwa neiyo chipo chekutendeuka kukwanisa dzidza kubva kuzvikanganiso zvedu, uve vanhu vari nani, uye dzokera kuna Baba vedu Vokudenga vane rudo. Kuti utendeuke, pfugama unamate nemubhedha wako manheru ega ega usati warara, kana chero nguva yaunonzwa uchidemba mhosva. Kumbira Mwari kuti vakuregerere pane chero chinhu chawakaita chinoda kutendeuka. Inzwa iyo rudo, rugare nerufaro zvaAnazvo kwauri.
6. Inzwa rugare rwuri mumoyo mako
heyi nzira dzakawanda dzekuwana rugare. Imwe yenzira huru dzekuwana rugare mumoyo kutendeuka. Kupfidza kunobvisa mhosva nekunyara. Paunoita chimwe chinhu chisina kunaka, unogona kunzwa uine mhosva mukati kunyangwe pasina mumwe munhu anoziva nezvazvo. Kune akawanda magwaro anogona kukubatsira iwe zvakare. Dzinowanikwa muBhaibheri. Magwaro matsvene anotibatsira kuti tinzwe zvirinani kana tichinzwa zvakashata nezvatakaita.
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba wakadzidza kuti ungaziva sei kana Mwari vandiregerera. Kana ikozvino iwe uchida kuziva kugamuchira Jesu seMuponesi, ramba uchivhura Ziva.online.